Mpanamboatra fonosana plastika - Mpanamboatra kitapo plastika China
Tombo-kase Vacuum sakafo 10 ″ X 50'- 2 isa
Endri-javatra: 1. Mampiasa fitaovana Premium PA / PE ary fitaovana teknika avo lenta. PA / PE akora fototra: Teknolojia telo-porofo dia avy amin'ny sosona 5 matevina fanamafisana ny hafanana maharitra fitehirizana maharitra, ny sosona nylon afovoany (PA) dia manakana ny rivotra mangatsiaka sy ny rano tsy hiditra ao anaty kitapo famatrarana. Ny fitaovana malefaka matevina tsy misy tohotra: ny tanjaky nylon sy ny tanjaka amam-bika dia miova miaraka amin'ny maripana ary mety hampangatsiaka sy hivaingana, miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana mahery. 2. Manaraka ny fo ...
Ny fampifangaroana ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny Quad Seal sy Stand Up Pouch, ny Flat Bottom Bag (fantatra ihany koa amin'ny hoe Box Pouch) dia manana antso ambony eo amin'ny talantalana, ary manatsara ny talantalana sy ny fitoerana fonosana miaraka amin'ny gusset amin'ny endrika ambany baoritra. Kitapo ambany ambany dia mamela ny famenoana ambony mora sy mifanaraka amin'ny fampiharana an-tsena isan-karazany, manomboka amin'ny hazan-dranomasina, kafe ary muesli, ka hatramin'ny vokatra sakafon'ny biby sy ny fambolena. Ny endri-javatra amin'ny Flat Bottom Bag, ny lamination matanjaka matanjaka dia manome henjana tsara ho an'ny fijoroana ...
Ny fampifangaroana ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny Quad Seal sy Stand Up Pouch, ny Flat Bottom Bag (fantatra ihany koa amin'ny hoe Box Pouch) dia manana antso ambony eo amin'ny talantalana, ary manatsara ny talantalana sy ny fitoerana fonosana miaraka amin'ny gusset amin'ny endrika ambany baoritra. Kitapo ambany ambany dia mamela ny famenoana ambony mora sy mifanaraka amin'ny fampiharana an-tsena isan-karazany, manomboka amin'ny hazan-dranomasina, kafe ary muesli, ka hatramin'ny vokatra sakafon'ny biby sy ny fambolena. Ny endri-javatra amin'ny Flat Bottom & Stand Up Bag
Ny fampifangaroana ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny Quad Seal sy Stand Up Pouch, ny Kraft Paper Flat Bottom Bag (fantatra amin'ny anarana hoe Box Pouch) dia manana antso avo amin'ny talantalana avo indrindra, ary manatsara ny talantalana sy ny fitoerana fonosana miaraka amin'ny gusset amin'ny endrika carton. Kitapo ambany ambany dia mamela ny famenoana ambony mora sy mifanaraka amin'ny fampiharana an-tsena isan-karazany, manomboka amin'ny hazan-dranomasina, kafe ary muesli, ka hatramin'ny vokatra sakafon'ny biby sy ny fambolena. Endri-javatra amin'ny kitapo taratasy Kraft taratasy fisaka farany ambany lamination matanjaka manome henjana optimum ho an'ny ...
HONGBANG dia nizara vokatra vita an-tsarimihetsika vita amin'ny plastika vita amin'ny horonam-pirinty ho an'ny mpanjifa eran'i Eropa sy Amerika nandritra ny 20 taona. Manome karazany maro karazana sarimihetsika vita amin'ny plastika misy sakana izy io. Ny ankamaroan'ny vokatra horonantsary dia ampiasaina amin'ny fampiharana fonosana sakafo ary ny sisa dia mandeha amin'ny fampiharana manokana. Izahay dia manome vahaolana ho an'ny fampiharana sarimihetsika sarimihetsika sakana. Ny isan'ny configurations mety ho an'ny sarimihetsika misy sosona marobe dia tsy manam-petra. Na ...
Amin'izao fotoana izao, ny fampidinana ireo viriosy dia lasa zava-dehibe indrindra, noho izany ny orinasanay dia mandray anjara amin'ny ady amin'ny tontolo. Manome fonosana saron-tava fonosana vita amin'ny plastika misy logo izahay, izay miaro ny saron-tavao amin'ny fahasimbana mety hitranga rehetra ary manalava ny fotoana fitahirizana. Ireo kitapo plastika dia misy zipper na kasety fametahana tena eo an-tampony. Ireo no mahatonga ny sarontava tarehy ho mora kokoa sy mahasoa ny mpampiasa. Ny fonosana iray dia misy saron-tava 1-20 na mihoatra. Izahay dia mamokatra kitapo fonosana saron-tava azo ampiasaina ary azo ampiasaina indray ...
Air Column Bag ho an'ny fampiasana vokatra mahomby ary ataovy maimaim-poana ny fahasimbanaNy haben'ny tsivalana an'habakabaka dia 2 sm, 3 sm Ny sakany amin'ny habakabaka dia misy fiantraikany tsara kokoa. Fa ny be mpampiasa indrindra dia 3 cm ny sakany. Ny hateviny koa dia manana 7um, ny matevina matevina dia manana fiarovana tsara kokoa koa. Raha mila fanamboarana ianao dia mifandraisa aminay mba hiadian-kevitra. Izy io koa dia mety ho rovitra na hokapaina, maniry hanangona entana mora tohina, toy ny asa-tànana fitaratra, fanaterana an-tsoratra, divay mena, porselana, zavamaneno mazava, sns ...